11 ก.ย. 2562 - 00:50 น.
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥရောပကောင်စီ (European Council on Tourism and Trade) ECTT က ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနဲ့ မြန်မာပြည်ကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုတွေကို လာမယ့်စက်တင်ဘာလ၂၇ မှာ ပေးဖို့ရှိပြီး မြန်မာအစိုးရဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ပြီးဆုယူဖို့ရှိနေပါတယ် ။
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပမယ့် ကမ္ဘာ့ခရီးသွားနေ့ပွဲတော်နဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ခရီးစဉ်ဒေသဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားတွေကို လည်း ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမယ်လို့ ECTT ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒု-သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွာလာရေးဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်နဲ့ တခြားအစိုးရအရာရှိကြီးတွေနဲ့လည်း တွေ့သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ ECTT က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖဝါရီလ တုန်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန် အဖွဲ့ကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျောင်းအတု တစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီး သင်တန်းတွေဖွင့်ဖို့လုပ်နေတာကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကို တိုင်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။
အခု ဒု-သမ္မတ နဲ့ ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာန နဲ့ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန် အဖွဲ့ကို ဆုပေး မယ်လို့ပြောတဲ့ အဖွဲတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ သိက္ခာရှိတဲ့ အဖွဲစည်းတွေ မဟုတ်ဘဲ ကျောင်းအတုနဲ့ အမည်ခံ အဖွဲ့စည်း အတုတွေဖြစ်တယ်လို့ ဒီဆုတွေ အကြောင်းဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒ မဟာဘွဲ့တက်ရောက်သင်ကြားနေသူ မြန်မာကျောင်းသား ကိုနေယံဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဘယ်တုန်းလောက်က စပြီး ဆုအတုတွေ ရှိလာတာလဲ
မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတကာကပေးနေတဲ့ ဆုအတုတွေ၊ ထင်ယောင်ထင်မှား ဆုတွေ ဟာ ဘယ်တုန်းလောက်က စနေတယ် ဆိုတာ မပြောနိုင်ပေမယ့် ကိုနေယံဦးကတော့ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကတည်းက ရှိနေတယ်လို့ ယူဆရတယ်လို့လည်း ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အဲဒီခေတ်တုန်းကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပေးတဲ့ ဒေါက်တာဆုတွေ ပေးတာများပါတယ် ။
စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ လည်း နိုင်ငံတကာက ပေးတဲ့ ဆုတွေမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရတဲ့ ဒေါက်တာဆုတွေရှိပါတယ်။အဲဒီထဲက အချို့ဟာ အတုတွေလို့ ဝေဖန်ခံရတာ ရှိပါတယ်။
ကိုနေယံဦးကတော့ သူဟာ အခု အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရလက်ထက်မှာ စတင်ပြီးတော့ ဆုအတုတွေတွေ ပုံမှားရိုက်ထားတဲ့ ဆုတွေကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ သူစောင့်ကြည့်တွေ့ရှိရသလောက်ကတော့ နှစ်ဆု ရှိပြီလို့လည်း ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်ကိစ္စ ကတော့ ကျောင်းအတုသေချာတယ်၊ အခုခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဒုသမ္မတ ကို ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆု ကတော့ ဥရောပ သမဂ္ဂ လက်အောက် က ဥရောပကောင်စီကို ပုံမှားရိုက်ထားတာလို့လည်း " ကိုနေယံဦး ကပြောပါတယ်။
ဘာလို့ အလွယ်တကူ လက်ခံကြတာလဲ
အရင်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရဲထွဋ် ကတော့၂၀၁၄ခုနှစ်တုန်းက ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥရောပကောင်စီ (European Council on Tourism and Trade) က မြန်မာနိုင်ငံကို ခရီးသွားဆု ပေးအပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ အဖွဲ့အစည်းအပေါ် သံသယရှိ တာရယ်၊ သူတို့ဘက်က ကုန်ကျစရိတ်အပါအဝင် တောင်းခံမှုတွေ ရှိတဲ့အတွက် ရယ်ကြောင့် ဝန်ကြီးဌာနက ဆုလက်မခံဘဲ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားပါတယ် ။
ECTT ဆုပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာမယ့်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးလောက် ပါဖို့ရှိပြီးတော့ လေယာဉ်လက်မှတ် အပါအဝင် တည်းခိုနေထိုင်စရိတ် အတွက် မြန်မာအစိုးရ ဟာ ကုန်ကျခံရဖို့ရှိပြီးတော့ မြန်မာငွေနဲ့ ကျပ်သိန်း၄၅၀ ဝန်းကျင်လောက် ကုန်ကျမှာလို့လည်းကိုနေယံဦး ကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီးကတော့ မြန်မာအစိုးရကို ဆုပေးမယ့် ECTT ဟာ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ ဘယ်လိုမှပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းငြင်းထားပါတယ်။
ဒီလို ပုံမှားရိုက်တဲ့ဆုတွေ ထင်ယောင်ထင်မှားဆုတွေကို ဘာလို့ လက်ခံတာလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုနေယံဦးကတော့ အစိုးအရ ဟာ သူ့ဘာသာ ရိုးရိုးသားသား မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လည်း ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
"မြန်မာပြည် က အခုမှ တံခါးဖွင့်လိုက်တာဆိုတော့ နိုင်ငံခြားက အဖွဲ့တွေဝင်လာတယ်၊ ဆုတွေဝင်လာကြတယ် ၊အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်တိုင်က သူတို့ ဟာအတုလား အစစ်လားသေချာမသိဘူး ၊ဒီတော့ သူတို့ ကလက်ခံလိုက် ကြပုံရတယ်၊ ရိုးသားတဲ့အမှားပေါ့ ၊နောက်တစ်ခု က အမှားလုပ်မိတာတော့ဟုတ်ပြီ ပြည်သူလူထု ကထောက်ပြရင် လက်ခံသင့်တာပေါ့ ဒါအပြင် ဒီကိစ္စ တွေမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာ လည်း သတိထားသင့်တယ်"လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
ETCCက မြန်မာနိုင်ငံကို၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ခရီးစဉ်ဒေသဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ဖို့ လုပ်ခဲ့သလို အဲဒီတုန်းကငြင်းလိုက်လို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ တကျော့ပြန်ပြီး ဒီအဖွဲ့က ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အဖွဲ့ကပေးတဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ခရီးစဉ်ဒေသဆုကို ရခဲ့တဲ့နိုင်ငံစာရင်းတွေကို ကြည့်ရင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ များပါတယ် ။
၂၀၁၃ - လာအို ၊၂၀၁၄ - ဇင်ဘာဘွေ၊၂၀၁၅ - အီသီယိုးပီးယား၊၂၀၁၆ - ကမ္ဘောဒီးယား၊ ၂၀၁၈ - ကမ္ဘောဒီးယား (ဒုတိယအကြိမ်ရရှိ)၊၂၀၁၉ - မြန်မာဒီဆုကို ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ETCCက အဓိက အားဖြင့်တော့ ဆင်းရဲတဲ့၊ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီး ဒီအဖွဲ့က လုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့တွေဟာ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကို ပစ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်၊ အဲဒီထဲမှာ မြန်မာဟာ ဒီလို အဖွဲ့တွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ကိုနေယံဦးကပြောပါတယ်။
ဒီဆုတွေကို ပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘယ်လို ချိတ်မိသွားတယ် ဆိုတာ ကိုတိတိကျကျ မသိရသလို ဆုယူဖို့ မယူဖို့ကိုလည်း အခုထိတော့ အစိုးရဘက်က ပြန်ရှင်းတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
ဒီဆုကို လက်ခံရယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်တော့ ဆုအတွက် အသုံးစရိတ်ကို ဘယ်သူက သုံးစွဲခွင့် ပေးတာလဲ။ ဘယ်လောက်တောင် ကုန်သွားပြီလဲ။ ဘာတွေအတွက် သုံးတာလဲ။ ဒါတွေဟာ တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းဖို့လည်း ရှိလာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဖက်ကတော့ ဒီကျောင်းကိစ္စဟာ အစိုးရအဖွဲ့ ကို တင်ပြပြီးမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ အဂတိလိုက်စားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်မှု မရှိဘူးလို့ တုံ့ပြန့်ခဲ့ပါတယ်။
"ဝန်ကြီးဌာနက လာတယ်ဆိုရင်တော့ ဝန်ကြီးဌာနက သေချာ စိစစ်သင့်တယ်၊ လွယ်လွယ်ကူကူ လက်မခံသင့်ဘူး။ သုတေသနတွေ ဘာတွေ လုပ်သင့်တယ်၊ အဲဒီအချိန်မှာလည်း မီဒီယာတွေ ကျွမ်းကျင်သူတွေ ထောက်ပြရင် လက်ခံသင့်တယ်၊ မှားရင်လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရဲရဲရင့်ရင့် ဝန်ခံသင့်တယ်၊ မသိလို့ မှားတာဆိုရင် ပြည်သူလူထုက ဒါကို လက်ခံမှာပါ"လို့လည်း ကိုနေယံဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့တွေက အစိုးရကို ချဉ်းကပ်လာရင် သူတို့ကို လာချဉ်းကပ်သူတွေဟာ မှန်မမှန် စိစစ်ဖို့ ဆိုတာက အစိုးရနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ထမ်းတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း ကိုနေယံဦးက ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ သာမန် ပြည်သူတွေတောင် လုပ်နိုင်ရင် သူတို့လည်း လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့၊ ဒါဟာ အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူ လေ့လာလို့ ရတဲ့ဟာပဲ၊ နောက်တစ်ခုက ဒါကို မကျွမ်းကျင်ဘူး ဆိုရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့ အန်ဂျီအိုတွေ၊ နားလည်သူတွေကို အကူအညီ တောင်းသင့်တယ်" လို့လည်း ကိုနေယံဦးက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးအကဲတစ်ယောက်ကို ဒီအတိုင်း ဆုပေးလို့ မရဘူးလို့ နိုင်ငံတကာ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို နားလည်တဲ့သူက ပြောပါတယ်။
"ဒီဟာ ဒုသမ္မတ ကတော့ ဒါကို သိနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်က ထွက်လာတာလဲ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်၊ဆုပေးမယ် ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံက သံရုံးပါမယ်၊ သံရုံးကနေ နိုင်ငံခြားရေး အဲဒီကနေ ဟိုတယ်ခရီး သမ္မတရုံး အဲလို အဆင့်ဆင့် သွားရတာ၊ ဒီအဆင့်တွေမစိစစ်နိုင်ဘူးလား၊ ဒါ ဘယ်လို ဖြစ်လာတယ် ဆိုတာက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်၊ ဒါဟာ လုပ်နေကျ အဆင်တွေမို့ ရိုးရိုးသားသား မှားတာလို့ ပြောရခက်တယ်"လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာ လာမယ့် စက်တင်ဘာမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဆုပေးမယ့် ဒီအဖွဲ့ဟာ အတုလား ဆိုတော့ အတု လို့တော့ ပြောလို့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဥရောပသမဂ္ဂကို ထင်ယောင်ထင်မှား လုပ်ပြီး ပုံမှား ရိုက်ထားတဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်လို့ ဒီလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်မိတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်း သွားဖို့ပဲ ရှိပါတယ်"လို့လည်း ကိုနေယံဦးက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ မြန်မာနိုင်ငံကို ပေးနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆုအတုများ